मर्निंङ सोज द डे - Chhuteka Kura
Komal Adk. प्रकाशित मिती : ६ माघ २०७८, बिहीबार १४:११
अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ – मर्निंङ सोज द डे ।
यस वाक्यांशले भन्न खोजेको यत्ति हो कि– हाम्रो दिन दैनिकी कस्तो हुन्छ? भन्ने कुरा दिनको सुरुवातले नै सङ्केत गर्दछ। त्यसैले सुरुवात अर्थात् बिहानी उत्तम बनाउन सके मात्र दिन राम्रो हुन्छ।
पूर्वीय दर्शनले समेत ब्रह्ममुहूर्त अर्थात् बिहानको समयलाई महत्त्वपूर्ण मान्दछ । विहान गरिने क्रियाकलापलाई शारीरिक र मानसिक सफलतासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। यसै पृष्ठभूमिमा सफलताका लागि बिहानको समयमा के गर्नु उपयुक्त हुन्छ त भनेर पूर्वीय दर्शनहरूको सार यहाँ प्रस्तुत छ।
हरेक बिहान “ब्रम्हमुहुर्त”मा यसो गर्ने:
आफ्नो हत्केला हेर्नुहोस्: बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हत्केला हेर्नुहोस्। यसो गर्नाले महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवान् विष्णुको साथमा अन्य सबै देवी देवताहरूको कृपा पाइन्छ।
बिहानै पृथ्वीलाई प्रणाम गर्नुहोस्: आफू सुतेको बिस्तराबाट खुट्टा भुँइमा राख्नभन्दा पहिले भूमिलाई प्रणाम गर्ने गर्नुहोस्। धर्तीको ऊर्जामा हाम्रो खुट्टा राख्नाले हामीलाई दोष लाग्छ, उक्त दोस निवारणको निम्ति क्षमा युक्त भूमि नमन आवश्यक हुन्छ।
सूर्यलाई जल चढाउनुहोस्: हरेक बिहान हुने सूर्योदयलाई जल चढाउन गर्नुहोस्। यसो गर्नाले घरपरिवार र समाजमा आफ्नो मान सम्मान बढ्छ। त्यसै गरी सूर्यसँग सम्बन्धित दोषबाट उन्मुक्ति मिल्नका साथै मानसिक शान्ति मिल्छ।
घरको मन्दिर सफा राख्नुहोस्: घरमा रहेका सबै मूर्ति र पूजा सामग्री सही ढङ्गले सजाएर राख्नुहोस्। यसबाट वास्तुदेवता प्रसन्न हुन्छन् र कुण्डली दोष समेत निराकरण हुन्छ। घरमा मन्दिर हुँदा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ।
घर भन्दा बाहिरको मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च समेत जानुहोस्: दिनको सुरुवात पूजापाठबाट गर्नाले मनमा शान्ति अनि अनुहारमा कान्ति छाउँछ मन्दिर जानु धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र नभएर वैज्ञानिक दृष्टिकोणले समेत लाभयुक्त छ। मन्दिरभित्र खाली खुट्टाले प्रवेश गर्नाले त्यहाँको सकारात्मक उर्जा हाम्रो खुट्टाको माध्यमबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। खाली खुट्टाले हिँड्दा खुट्टामा रहेको प्रेसर प्वाइन्टमा दबाब पर्छ । यस कारण उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा आउँछ। यसरी नियमित मन्दिर जाँदा मुटुका रोगीलाई समेत फाइदा पुग्छ। मन्दिरको शीतल वातावरणले आत्मविश्वास बढाउँछ। नियमित मन्दिर जाँदा तपाईँमा कुनै काम प्रति एकाग्रता बढ्छ। मन्दिरको वातावरणले शान्त रहने तथा आक्रोश कम हुने हुन्छ। मन्दिरहरूमा बजाइने भजन र वाद्यवादन सामग्रीले तपाइलाई मानसिक रूपमा शान्ति र सकारात्मक शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मन्दिर जानाले तपाईँको मनमा आउने अनावश्यक सोचहरू हट्छन्। तनाव दूर गर्छ, मन शान्त हुन्छ। यस कारण राति सुत्दा पनि राम्रो निद्रा आउँछ।
यसरी हाम्रो दिन दैनिकी जीवनमा सुन्दा, पढ्दा, हेर्दा सामान्य लाग्ने कुराहरू नै हुन् महत्त्वपूर्ण सफलता दिलाउने र सफलतामा बाधक बन्ने। यी र यस्ता छुटेका कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गबाट व्यवहारमा ल्याउन सके जीवनको सुन्दरतम् पक्षसँग सहज साक्षात्कार हुनेछ।
मनोज र अस्मिताले ल्याए खोलीको पानी ६ माघ २०७८, बिहीबार १४:११
आमा जस्तै धर्ती र धर्ती जस्तै आमा ६ माघ २०७८, बिहीबार १४:११
कृष्ण प्रसाईँको “घामको आयु” कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक ६ माघ २०७८, बिहीबार १४:११
लेख्ने, लेख्नेहरूको लागि सपना देख्ने कमलको सपना छिटै पुरा होस – जन्मदिनको शुभकामना ६ माघ २०७८, बिहीबार १४:११
त्यो सपनालाई धन्यवाद – बसन्तचन्द्र मरहट्टा ६ माघ २०७८, बिहीबार १४:११